သောသီခို: ဟားတိုက်ရယ်တယ် မထင်လိုက်နဲ့ ငြုပ်သီးစပ်လို့
ကေအိုင်စီသတင်းဌာနရဲ့ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် M ထက်ခေါင်ရဲ့ စပယ်ရှယ် ဆောင်းပါးတပုဒ်ပါ။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရန်သူစစ်အုပ်စုက ကြည်းတပ်၊ လေတပ်၊ အမြောက်တပ်တို့ဖြင့် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကျူးကျော် ထိုးစစ်ဆင်လျက်၊ ကချင်ပြည်သူများအား စော်ကား သတ်ဖြတ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများအပေါ် ကေအိုင်အို၏ စစ်ရေး နိုင်ငံရေး အသာစီးရရှိလာမှုနှင့်အတူ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ ယူအဲန်အက်ဖ်စီ၏ အခန်း ကဏ္ဍသည်လည်း ထင်ရှားတောက်ပြောင်လာချိန်၊ ယူအဲန်အက်ဖ်စီ အဖွဲ့တွင် အထင်ကရ အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သော ကေအဲန်ယူ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာမူ ကရင်လူထုများအကြားမှာပင် ရေပန်းမစားတော့ဘဲ ဖြစ်လာသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် စစ်ကို အယောင်ပြ ရပ်ဆိုင်းခိုင်းနေသည့် အရပ်ဝတ်အရေခြုံ လူထုဆန္ဒမပါသော မဲလိမ်မဲခိုး သမ္မတနှင့် လူထုဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုကာ စစ်အုပ်စု လက်က သုံးတောင်ဝှေးအဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိ ထိုးအပ်ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ ဂုဏ်သတင်းမှာလည်း ပျက်ယွင်းမှေး မှိန်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်လေသည်။
နယ်မြေအတွင်း ကျူးကျော်လာသည့် တိုက်လေယာဉ်များ၊ စက်သေနတ်များ၊ စွမ်းအားပြင်း အမြောက်ကြီးများ၊ မီး လောင်ဗုံး အပါအ၀င် ဓာတုဗုံးလက်နက် ကြဲချခြင်းများကို ခိုင်မာပြတ်သားသည့် ရပ်တည်ချက်ဖြင့် မဆုတ်မနစ် တွန်းလှန် လျက်ရှိသော ကေအိုင်အိုကို ကမ္ဘာက အာရုံစိုက်လာကြပြီ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကကော အမေရိကန်ကပါ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်လာကြပြီး ဗြိတိန်ကလည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည့်ကိစ္စအပေါ် ပြန်လည် စဉ်းစားသုံးသပ်မည်ဟု ဆိုလာပြီ ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများနှင့် တွန်းအား ဖိအားအမျိုးမျိုး အရှိန်မြင့်လာသည့် အချိန်မှာပင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ထံမှ လှုပ်သည်ဆိုရုံကလေး မပွင့်တပွင့် အသံထွက်လာခဲ့သည်။ တဦးနှင့်တဦး အပြန်အလှန် လေးစား နားလည်မှု မရှိ၍ ဤကဲ့သို့ စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်း ဟူသောစကားကို တဖန်ပြန်၍ အပ်ကြောင်း ထပ်လာသည်။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ကို မလေးစားတာလဲ၊ ဘယ်သူက လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမည့် စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေကို စတင်ချိုးဖောက်တာလဲ၊ ဘယ်သူက ကျူး ကျော်စော်ကားတာလဲ ဆိုသည်ကိုတော့ တိတိပပ ခြေခြေမြစ်မြစ် ထုတ်ဖော်မပြော။ ထိုကိစ္စကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် တကယ် တမ်း တဦးပေါ်တဦး လေးစားနားလည်မှု ရှိလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ၊ တကယ်တမ်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက် လုပ်သင့်လုပ် ထိုက်တာတွေက ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ဆိုသည်ကိုလည်း လမ်းညွှန်မပေး။
နေ့စဉ် နာရီစက္ကန့်နှင့်အမျှ အရေးကြီးနေချိန် ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့က ကြားဝင်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုခဲ့သည့်အပြင် မီဒီယာများကပါ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြသည်ကို အရေးမထားသလို နေခဲ့ပြီး “နိုင်ငံတော်အစိုးရက တာ ၀န်ပေးရင် လုပ်မယ်” ဆိုသည့်စကားတခွန်းသာ ပြောလျက် မျက်နှာလွှဲနေခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ အရေခြုံ အစိုးရက ကချင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတာဝန်မျှ မပေးပဲ ယခုလို ပြောလာရသည်မှာ ဗြိတိန်၏ ပြန်လည်စဉ်းစားမည်ဆိုသည့် မက် ဆိတ်ဂ်ျကြောင့် စစ်အုပ်စု၏ မြားဦး သူမဘက်သို့ လှည့်မလာခင် ကြိုတင် ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်ခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်လေသည်။ အစ က ငါမပြောလား ဆိုသည့် သဘောမျိုး သူမ ပြော၏။
ယခုဖြစ်နေသည့် အခြေအနေက အတော်ပင် ရှုပ်ထွေးလာသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်များကထက်ပို၍ နက် နဲသိမ်မွေ့လာသည့် အခြေအနေမျိုး၊ ရန်နှင့်ငါ ပူးပေါင်းသွားကြသောကြောင့် ဘယ်ဟာကရန် ဘယ်ဟာကငါ ဟူ၍ ပီပီပြင်ပြင် သတ်မှတ်၍ မရနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုး၊ ရန်ငါ မကွဲတော့ပဲ ရန်သူ ပျောက်လာသည့် အခြေအနေမျိုး၊ ရန်ငါ ခွဲခြား ရှင်းလင်းရေး လုပ်ရာတွင် အမှားအယွင်း အတိမ်းအစောင်း မခံနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုး၊ ဖိနှိပ်သူနှင့် အဖိနှိပ်ခံ တော်လှန်သူများ တဘက်နှင့် တဘက် ပူးပေါင်းသွားမိကြပြီး ထွေးရောယှက်တင် အားပြိုင်နေကြသည့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လေသည်။
ကာလကြာရှည်စွာ ကြိုးပမ်းတောင်းဆိုခဲ့ကြသော သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးမှာ အများမျှော်လင့်သည့်အချိန်တွင် မျှော် လင့်သလို ဖြစ်ပေါ်မလာဘဲ အများမမျှော်လင့်သည့်အချိန်၊ ကြိုတင်မှန်းဆမထားသည့် အနေအထားမျိုးဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်လေသည်။ ဒီမိုကရေစီရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စစ်အုပ်စုဟူသည့် သုံးဦးသုံးစုစလုံးက မိမိတို့၏ ရန်သူများကို ပူး၍သတ်ရန် အသီးသီးက ဆုံး ဖြတ်လိုက်ကြပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော နိုင်ငံရေး အရှုပ်အထွေး ဖြစ်သည်။
တချိန်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ကို အပစ်ရပ်နိုင်ရေး ဘိန်းစိုက်ခွင့်များပေးပြီး အကြီးအကျယ် ချမ်းသာ စေခဲ့သည့်အဖြစ်မျိုးတွေ ရန်သူက လုပ်ခွင့်ပေးလာပြန်သည်။ ဒေသတွင်းမှာ ဆည်မြောင်းတာတမံများ၊ စက်မှုဇုံများကြောင့် ဒေသခံတွေ ပြောင်းရွှေ့ရ အခက်တွေ့ကြရသည်။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘ၀ရပ်တည်နေသည့် ကွမ်းသီးခြံ၊ ရော်ဘာခြံ၊ သီးစုံ ဥယျာဉ်ခြံမြေများနှင့် အိုးအိမ်တို့ကို မဖြစ်စလောက် လျော်ကြေးကလေးများဖြင့် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံရသော ဒေသခံတို့ မချိတင် ကဲ ဖြစ်ကြရသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုများအတွက် ကန့်ကွက်လှုပ်ရှားနေသော မြစ်ချောင်းစောင့် ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာမြေစိမ်းလန်းလိုသူတို့၏ မျက်နှာကို ခြေနှင့်ကျောက်လိုက်သလိုပင် ဖြစ်လေသည်။
စစ်အုပ်စုနှင့်ပေါင်း၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို တစတစလုပ်ယူရန်ကြံရင်း သူမကိုယ်တိုင် စစ်အုပ်စု၏ အသုံးချခံဘ၀သို့ ရောက်သွားခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ လူထု၏ ဝေဖန်တင်ပြ ပြောဆိုလာမှုများကို ထီမထင်စော်ကားသည့် အပြောအ ဆို အပြုအမူများကို တွေ့လာရသည်။ လူထု ယုံကြည်လေးစား ချစ်ခင်သူတဦးက လူထုအရေးကို အလေးမထား၊ လူထုသဘော ထားကို မျက်ကွယ်ပြုလာသည့်အဖြစ်မှာ ဗမာပြည်ကို စစ်ကျွန်ဘ၀ထဲ နစ်ပြီးရင်းနစ်နေစေတော့သည်။
စစ်အုပ်စုက နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်၍ မနိုင်နိုင်၊ အမြစ်မပြုတ်နိုင်သည့် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ဗကပ၏ ပန် ဆန်း၊ ကေအဲန်ယူ၏ မာနယ်ပလောတို့ကို သပ်လျှိုဖြိုခွဲခဲ့သလိုမျိုး၊ မဖြစ်စလောက် အလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုများ ပြုလုပ်ကာ နည်းမျိုးစုံဖြင့် အယုံသွင်း ကပ်ပေါင်းပြီး အုပ်စီးချုပ်ကိုင် ချေမှုန်းပစ်ရန် ကြိုးပမ်းလာသည်။
“တတိုင်းတပြည်လုံး ဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေချိန်မှာ ကိုယ်တယောက်တည်း ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ ရှက်စရာ ကောင်းတယ်” ဟူသော စကားမျိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တချိန်တုန်းက ပြောခဲ့ဘူးသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့လက်ငင်းကာလ တွင်မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခရိုနီတို့၏ အန်တီစု ဖြစ်၍နေလေပြီ။ “ခရိုနီတွေကို သံသယအကျိုး ခံစားခွင့်ပေးပြီး အပြစ် မရှိဘူးလို့ သတ်မှတ်ရမယ်၊ အပြစ်တွေလုပ်ခဲ့ရင်လည်း ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးရမယ်”ဟု သူမ ဆို၏။
ပတ်ဝန်းကျင် နေရာထိုင်ခင်း ကြပ်တည်း ကျဉ်းမြောင်းသော ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ပုံမကျပန်းမကျ သုံးထပ်တိုက်ငယ်၏ တခြမ်းကို ကျပ်သိန်းလေးထောင်ကျော် ငါးထောင်နီးပါး ပေါက်ဈေးရှိနေချိန်၊ ခရိုနီ နှစ်ဦးသုံးဦးထံမှ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ခန့် ပညာရေးရံပုံငွေ လေလံတင်ပစ္စည်း ရောင်းချငွေကလေးများ ရလိုက်ရုံဖြင့် ခရိုနီတွေနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရသည်ကို နှစ်ခြိုက် ကြည်နူးနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ခရိုနီတွေ သိမ်းယူထားသည့် လယ်မြေများကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြရ သော အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လယ်သမားများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ အလုပ်သမားများ၊ နေ့လုပ်နေ့စား အောက်ခြေအလွှာများ၏ ငိုရှိုက်သံကို အနည်းငယ်မျှ နားစိုက်ကြည့်သင့်လေသည်။
ယခင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်သမျှ ဘေးမှနေ၍ ထိန်းကွပ် ၀န်းရံ ထောက်ခံပေးခဲ့သော သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခရိုနီမျက်နှာ ရွှေချသည့်ကိစ္စကို လက်မခံနိုင်ချေ။ တိုင်းပြည်ကို ဓားပြတိုက်၊ အနုကြမ်း စီး၊ အလွဲသုံးစားလုပ်၊ အချောင်နှိုက်လာခဲ့သည့် သူခိုးသူဝှက် အကြီးစားတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် အရေးယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မီဒီယာတရားခွင်မှ လူထုတရားခွင်၊ ကမ္ဘာ့တရားခွင်အရောက် ပို့ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သူ့သဘောထားကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားသည်။ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြ ဆောင်ရွက်နေသော ကိုထင်ကျော်ကလည်း ခရိုနီတွေကို လုံးဝ လက်မခံ။ ခရို နီဆိုတာ ကြီးကြီးသေးသေး အများပြည်သူကောင်းကျိုးကို ဘယ်တော့မှ မကြည့်တတ်ဘူးဟု ဆို၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ နေဖြင့် ယိုင်နဲ့နေသော သဘောထားအတွေးအခေါ်များကို အချိန်မနှောင်းမီ ပြုပြင်ထိန်းကျောင်းသင့်ပြီ ဖြစ်၏။
ကချင်ဘက်က ရပ်တည်ချက် မှန်ကန်သော်လည်း စစ်အစိုးရ ထောက်ခံသော ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်သစ်များကိုမူ ယူအဲန်အက်ဖ်စီအနေဖြင့် မယုံမရဲ ရှိလာပုံရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်များအတွင်း ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို သွား ရောက်တွေ့ဆုံကာ ယူအဲန်အက်ဖ်စီမှာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ယူအဲန်အက်ဖ်စီနှင့် မကင်းကွာဖို့၊ တပ်ပေါင်းစု၏ မူဝါဒရေးရာ ပိုင်းအရ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၌ ယူအဲန်အက်ဖ်စီနှင့် တပေါင်းတစည်းတည်း ရှိဖို့၊ ဆွေးနွေး ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(၁၅)ကြိမ်မြောက် ကွန်ကရက်အပြီး အရေခြုံသမ္မတသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုဖြင့် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရ သော ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်သစ်များ အဖို့၊ စစ်အုပ်စုနှင့်တွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့သည့် ဆွေးနွေးချက်များ မူများနှင့် ယူအဲန်အက်ဖ်စီ ၏ တပ်ပေါင်းစုမူများအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှု မရှိစေရန်အတွက် ယူအဲန်အက်ဖ်စီက ကေအဲန်ယူကို သီးခြားတွေ့ဆုံရခြင်း ဖြစ်၏။ ကေအဲန်ယူကမူ အပစ်အခတ်ရပ်ရေး ခိုင်မာအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တဖွဲ့ချင်းအနေဖြင့် တွေ့ဆုံသွား မည်ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံရေးကိုတော့ ယူအဲန်အက်ဖ်စီနှင့် ဆွေးနွေးသည့် မူကိုသာ ဆက်လက်ကိုင်စွဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် ယူအဲန်အက်ဖ်စီ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ယူအဲန်အက်ဖ်စီ တဖွဲ့တည်းက ဦးဆောင်သွားမည် ဆိုသည့်အချက်မှာမူ မိမိတို့၏ ပေါ်လစီနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း ပြောသည်။
တကယ်တော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုသည် မတူချေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်သော code of conducts များထက် ပို၍ အဆင့်မြင့်သည့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ဖြစ်သည်။ ထာဝစဉ်တည်တံ့ခိုင် မြဲမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရန်မှာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေမည် ဖြစ်သည်။ အပစ်ရပ်ရေး နှစ်ဘက် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း သဘောတူညီမှုများကို တဖွဲ့ချင်းအနေဖြင့် ဆွေးနွေးနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအဆင့်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကိုတော့ ယူအဲန်အက်ဖ်စီက ကိုင်မည်ဆိုသည်မှာ တရား နည်းလမ်းကျသည့် မူဝါဒ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လည်း ယူအဲန်အက်ဖ်စီ၏ ဦးဆောင်မှုသည် တဖွဲ့တည်း၏ ဦးဆောင်မှု မဟုတ်ချေ။ ယူအဲန်အက်ဖ်စီသည် တပ်ပေါင်းစုဖြစ်၏။
မိမိ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကို မိမိ ပြန်လည်ဝေဖန်ထောက်ပြရသည့်အလုပ်မှာ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းသလို ဖြစ်၏။ မည်သူမျှ ထိုအလုပ်မျိုးကို လုပ်လိုကြမည်မဟုတ်။ နိုင်ငံနှင့်အ၀ှမ်း လေးစားချစ်ခင်ကြသည့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း မဝေဖန်ချင်။ သူမအပေါ် ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေသော ရန်သူ့မီဒီယာများနှင့် တတန်းတစားတည်း သတ်မှတ်ခံ ရမည့်အဖြစ်မျိုး၊ ရန်သူဝမ်းသာကျေနပ်မည့် အဖြစ်မျိုးကို မလိုလား။ မပြောမဖြစ်လွန်းလို့သာ ပြောရ ရေးရခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော “Dictator watch” ၏ ဆောင်းပါး ၂စောင်ကိစ္စ။ “Treachery in the Karen National Union” ကေအဲန်ယူအတွင်း သစ္စာမဲ့ခြင်းနှင့် “The Karen Purge and Coup” ကရင်အာဏာသိမ်းပွဲ။ အွန်လိုင်းပေါ် အတော်ကလေးပြန့်နှံ့နေသော ထိုဆောင်းပါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကရင်လူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကေအဲန်ယူ၏ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရက်၏ ရွေးကောက်ပွဲပုံစံနှင့် ကွန်ကရက်မှ ရွေးကောက်လိုက်သော ခေါင်းဆောင်သစ် များအပေါ် သင်္ကာမရှင်း ဖြစ်ကြရသည်။ ရွေးကောက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ခေါင်းဆောင်သစ်တွေကို နေပြည်တော်က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံလိုက်သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဘ၀င်မကျ ဖြစ်ကြရသည်။ အစဉ်အလာရှိသော စစ်ရေး နိုင်ငံရေး ခေါင်း ဆောင်များ ကြီးငါးကြီးတွင် မပါဝင်တော့သည့် အဖြစ်ကိုလည်း နားမလည်နိုင်သူတွေ များစွာရှိသည်။ ယုံကြည်အားထားစရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဦးဆောင်မှုမပါရှိပဲ ကရင့်တော်လှန်ရေး ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံ ရှေ့ဆက်မလဲ ဆိုသည်ကို ရင်တမမ စောင့်ကြည့်နေ ကြသူတွေလည်း ရှိ၏။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သံသယဖြစ်မှုများမှသည် မကျေနပ်မှုများနှင့် ပွင့်အံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မည်ဆိုပါက တဘက်က လည်း ပြန်လည် ချေပထိုးနှက်ခြင်းများ၊ တဘက်နှင့်တဘက် ပုတ်ခတ် စော်ကားမှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး အာဏာရှိသူမှနေ၍ အင်အားသုံး ဖိနှိပ်ပိတ်ပင်မှုများ လုပ်မည်ဆိုပါက အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသာမက အမျိုးသားများအတွင်း စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ပါ ထိခိုက်လာနိုင်မည်ဖြစ်၏။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များက ထိုကိစ္စများ တအုံနွေးနွေးဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်မှု ရှိမလာစေရန်အတွက် တကယ် တမ်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သော ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဦးစီးခေါင်းဆောင်များကို ပြန်လည်ရွေးကောက်စေလိုကြသည်။ အချို့ကလည်း ပြန်လည်ရွေးကောက်ရမည့် အလုပ်မှာ မလွယ်ကူကြောင်း၊ ကလေးကစားသည့် အလုပ်မျိုး မဟုတ်ကြောင်း၊ ယခုတက်လာသည့် ခေါင်းဆောင်များကို စစ်အစိုးရဘက်ကပါ အသိအမှတ် ပြုထားကြပြီးဖြစ်၍ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကို အမြင်မရှင်းနိုင်သည့်တိုင် ညီလာ ခံသက်တမ်းတခုတော့ အောင့်အည်းသည်းခံကြရမည်ဟု ဆိုကြသည်။
အချို့ကမူ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကျေမနပ်ဖြစ်သူ အမြင်မရှင်းကြသူတွေ အားလုံး ချုပ်တည်းသည်းခံ နိုင်ကြမည်ဆိုလျှင် ကောင်းသော်လည်း လက်ရှိ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ခေါင်းဆောင်အချို့၏ လုပ် ဆောင်မှုများအပေါ် ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေကြသူများအနေဖြင့် ရှေ့လာမည့် ခေါင်းဆောင်မှု သက်တမ်းအတွင်း အမှားအယွင်းများ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပွစိပွစိဖြင့် မကျေမလည် ဖြစ်နေကြရမည့်အစား ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်နိုင်မည့် အင်တာနက် အွန်လိုင်းမှပင်ဖြစ်စေ ဆန္ဒခံယူမှု ပြန်လည်ပြုလုပ်သင့်သည်ဟု အချို့က ဆိုကြ သည်။ အချို့က အွန်လိုင်းက ဆန္ဒခံယူရေးမှာ တိကျ ခိုင်မာမှု မရှိနိုင်ကြောင်း၊ အိုင်တီ နည်းပညာအမျိုးမျိုးနှင့် ဟက်ကာများ ခေတ်စားနေသည့် ယခုအချိန်တွင် အဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေဖြင့် အရေးကြီးသော ဗဟိုခေါင်းဆောင်များ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များကို အင်တာနက်မှနေ၍ မဲပေးရွေးကောက်ခိုင်းသည့်အဖြစ်မှာ မသင့်လျော်သည့်အပြင် လုံခြုံမှုလည်း မရှိနိုင် ဟု ဆိုကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးကြီးသော ကိစ္စဖြစ်၍ ညီလာခံတခုကို အကျဉ်းရုံး၍ပင်ဖြစ်စေ ပြန်လည် ကျင်းပသင့် သည်ဟု ဆိုသူများလည်း ရှိသည်။
တကယ်တော့ ညီလာခံတခု ဖြစ်ဖို့ရန်မှာ လွယ်ကူသည့် ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း၊ တက်ရောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ နယ်မြေတွင်း အခြေအနေ၊ ခရီးလမ်းပန်းအခြေအနေ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် ညီလာခံ ကျင်းပမည့် နေရာဒေသအနေအထား၊ ကျင်းပမည့်အခမ်းအနား၊ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် စားသောက်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လုံခြုံရေးကဏ္ဍများအတွက် ကုန်ကျမည့် စရိတ်စကများ စသဖြင့် အချိန်ယူ၍ စီစဉ်ကြရကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ညီလာခံ ကွန်ကရက်ကို အစအဆုံး ပြန်လည် ကျင်းပရန် လို မည်မဟုတ်ပဲ ကွန်ကရက်တက်ရောက်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ထပ်မံ ဖိတ်ကြားကာ ဗဟိုဦးစီးခေါင်းဆောင် ရွေးကောက်ပွဲ သက် သက်ကိုသာ ၂ရက် ၃ရက်ကြာမျှ အသစ်တဖန် ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့် မည်သို့မျှ အပမ်းကြီးစရာ မရှိကြောင်း၊ ယခုလို ပွင့်လင်းရာသီချိန် တစ်လနှစ်လအတွင်းမှာပင် ဖြစ်မြောက်အောင် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ကြမည်ဖြစ် ကြောင်း အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များက ဆိုကြသည်။
ညီလာခံကို ကဖျက်ယဖျက် လုပ်လိုသူများ၊ ရန်သူ၏ ထိုးစစ်ဆင် နှောက်ယှက်မှုများ ပေါ်ပေါက်မလာနိုင်ရန်လည်း တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်များက ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားရမည်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့ ဆို၏။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြည့်ဝသော ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သစ်၏ စီစဉ်မှုဖြင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ပေးအပ်သော လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲများကို ယုံကြည်အားထားရသည့် အသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ရေတွက်ပြီးသည့်နောက် လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်သစ်များပင် ပြန်၍ရမည်ဆိုသည့်တိုင် ကေ အဲန်ယူ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ကော ပြည်တွင်းပြည်ပ ကရင်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ပါ အမြင်ရှင်းနိုင်ကြမည်ဟု ထိုပုဂ္ဂိုလ်များက ယူဆလေသည်။
စစ်အုပ်စု၏ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့အမတ်တဦးက ကေအိုင်အိုကို အပြတ်ချေမှုန်းပြီးမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် သင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းသည့်အပေါ် ကြံ့ဖွံ့အမတ်အများစုက ထောက်ခံဆွေးနွေးကြကြောင်း သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရ သည်။ ထိုအဆိုကို ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးသူတွေတော့ မရှိ။ တိုင်းပြည်ထဲ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုပွဲတွေ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ကျူးကျော်စစ်ပွဲတွေဖြင့် ပွက်လောရိုက်နေချိန် ပြည်တွင်း ပြည်ပခရီးစဉ်များ ၂၀၁၅အ တွက် စည်းရုံးဟောပြောပွဲများဖြင့် အလုပ်များပြနေခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ယခုတကြိမ်တွင်လည်း လွှတ်တော်တွင်း ၌ ရှိမနေချေ။ အကြမ်းမဖက်သည့်အတွက်ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မယောင်ရာဆီလူး ချီးမြှင့်လိုက်သော ဆုကိုယူရန် အမေရိကား သို့သွားနေပြီ ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကိုလည်း ၀င်လိုက်ဦးမည်ဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်သို့ပင် သွားရောက်လည်ပတ်ချင်သေးသည်ဟု သူမ ဆို၏။ ရောမက နီရိုးဘုရင်၏ စောင်းသံကလေးကို နားဆင်လိုက်ရသကဲ့သို့ ရှိလေသည်။
အချို့သော နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ကြံ့ဖွံ့အုပ်စု၏ သဘောထား အပေါ် ကန့်ကွက်ပြောဆိုကြမည်ကို ယုံမှားသံသယ ဖြစ်စရာမလိုချေ။ သို့ရာတွင် အဲန်အယ်လ်ဒီ၏ ရပ်တည်ချက်ကမူ တိုင်းရင်း သား ပြည်သူလူထုနှင့် ကင်းကွာစပြုလာပြီ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်တွင်း၌ ရှိမနေသော်လည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက မဲပေးခဲ့ကြသော အဲန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိနေ၏။ လူထုဘက်က ရပ်တည်ရမည့် အတိုက်အခံပါတီဝင်များသည် “လွှတ်တော်ထဲဝင်တာ အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး”ဟု ပြောခဲ့ဖူးသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စကားသံအောက် ကချင်ကို ချေမှုန်းမည့်ကိစ္စအ ပေါ် ကန့်ကွက်ပြောဆိုရေး တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်နိုင်ပဲ ရှိနေကြလေသည်။
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၅)က သူ့နယ်မြေအတွင်း ၀င်ရောက်လာသော စစ်အုပ်စု၏ ရိက္ခာယာဉ်တန်းကို စီးနင်းသိမ်း ပိုက်ကာ ဆန်အိတ် ၄၀၀ကျော်နှင့် ဆီ၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ပဲ၊ လ္ဘက်ခြောက်၊ သကြား၊ နို့ဆီ၊ အမဲဗူးနှင့် အရက်ဖာများ အပါအ၀င် ရိက္ခာ ပစ္စည်းများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း ကြားရသည်။ ကားတွေကိုတော့ ဘာမျှမလုပ်ပဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ တပ်မဟာ(၅)အနေဖြင့် ရန်သူအပေါ် သဘောထားကြီးကြောင်းနှင့် ဂရုမစိုက်ကြောင်း ပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကော်သူးလေနယ်မြေတွင်းမှ အခြားတပ်မဟာများအတွင်းမှာလည်း ဤကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သင့်သည်။ ရန်သူနှင့် ၎င်းတို့ခရိုနီ များ၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအယောင်ပြ စီးပွားရေး မက်လုံးပေး သွေးဆောင်မှုများနောက် အငိုက်မိစွာ လိုက်ပါနေ၍ မဖြစ်။
အပစ်အခတ်ရပ်ရေး ပဏာမသဘောတူညီမှုမျှသာ ရရှိသေးပြီး ပိုမိုခိုင်မာအောင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေဆဲ အခြေအနေမှာ ပင် စစ်အုပ်စုက ကော်သူးလေနယ်မြေအတွင်း ၎င်းတို့တပ်များကို တိုး၍ချထားပြီး တပ်တည်နေရာတွေကိုလည်း တိုး၍ ယူထား စေကာ ရိက္ခာပစ္စည်းများ မပြတ် ပို့ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ တပ်စခန်းတွေကို သစ်လုံးကြီးများ၊ သွပ်များ၊ အုတ်အင်္ဂတေ များဖြင့် အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ကာ စစ်ရေးအရ အသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းများ၊ ဘန်ကာများကိုလည်း တူးဖော် လုပ်ကိုင်ထားကြသည်။
ကချင်နှင့် ဖြစ်နေသော စစ်ပွဲကို ကျန်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ သွားရောက်မကူညီနိုင်စေရန်၊ ကချင်ကို တိုက်ခိုက်နေစဉ် ကရင်တို့ ရှမ်းတို့ဘက်မှာပါ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အရူးမီးဝိုင်းဘ၀ မရောက်ရစေရန်၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက်များကို ခပ်လွယ်လွယ် ခပ်မြန်မြန် ရယူထားစဉ်အတွင်းမှာပင် အချိန်မဖြုန်းတတ်သော ရန်သူသည် လာလတ္တံ့ သော စစ်ပွဲအတွက် ဒေသတိုင်း၌ အစစအရာရာ ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်နေလေပြီ။
Posted by PKD at 1:39 AM
Wake up KNU and ORTHER association.Enemys are around you,they are ready to fight you because now they can control KIA,KIO. TURN TO......
They cannot wake up now they have to sleep in Juses's place first afterward they been born again and knows their mistake and will fight the Enemy.But it's too late already because the Enemy already defeated them.Thanks God"Aman".Forgive me for Swelling God. I believe in God but I do not believe in Men cause Men are not trustful Human they can corrupt anytime for Money and wealth.